Nosamborin’ny polisy Indoneziana ireo mpianatra nilanja saina ‘Fetim-pahaleovantena Papoaziatika’ voarara · Global Voices teny Malagasy
Hiatrika fiampangana ho namadika tanindrazana sy fampidirana am-ponja ireo mpianatra
Voadika ny 07 Desambra 2021 3:56 GMT
Vakio amin'ny teny Yorùbá, Español, English
Hetsi-panoherana malalaka ho an’i Papoazia Andrefana tany Melbourne, Aostralia, tamin'ny volana Aogositra 2012. Sary avy amin'ny Wikipedia, (CC BY-SA 3.0)
Mpianatra valo no nosamborin'ny polisy ary natao fanadihadiana noho ny famadihana tanindrazana tany Papoazia, Indonezia, rehefa nanangana ny saina Kintan'ny Maraina tao amin'ny Lapan'ny Fanatanjahantena Cenderawasih ao an-tanàndehiben'i Jayapura ary nanao diabe nankany amin'ny foiben'ny polisy ao Papoazia ny Alarobia 1 Desambra. Nandrara ny olom-pirenena ny governemanta Indoneziana tsy hanangana ny saina Kintan'ny Maraina izay tandindon’ny fireharehana sy ny fiandrianam-pirenena Papoaziatika ao amin'ny faritra izay efa ela no nikatsaka ny fahaleovantena tamin'i Indonezia.
Araka ny voalazan'ny Suara Papua, nanao diabe nankany amin'ny foiben'ny polisy any Papoazia ireo mpianatra miisa valo, nanofahofa ny saina Kintan'ny Maraina ary nilanja sora-baventy mivaky hoe “Fizakan-tena ho an'i Papoazia Andrefana! Atsaharo ny fampiharana lalàna miaramila eto Papoazia Andrefana. Tongasoa eto Papoazia Andrefana ny Kaomisera Ambonin'ny Firenena Mikambana misahana ny Zon'olombelona.”
Notanana am-ponja vonjimaika izy ireo rehefa tonga teny amin’ny biraon’ny polisy ary mety ho voampanga ho mpamadika tanindrazana. Any Indonezia, mety hampigadra 20 taona an-tranomaizina ny fiampangana ho namadika tanindrazana.
Mpianatra miisa enina DT, EM, LS, MY, AM, MY no nosamborina noho ny fananganana ny saina voarara Kintan'ny Maraina. Hiatrika fiampangana amin'ny famadihana tanindrazana izy ireo izay mety mampigadra mandra-pahafaty.
Tamin'ny taona 1961 no nananganana voalohany ny Kintan'ny Maraina tamin'io andro io.
Ny 1 Desambra 2021, heverina fa tsy andro ofisialy amin'ny fetim-pahaleovantenan'i Papoazia Andrefana, nomarihana ny faha-60 taona nanofahofan'ny Papoaziatika voalohany ny sainam-pirenena Kintan'ny Maraina tamin'ny fikatsahana ny fahaleovantena avy amin'ny Holandey. Nanomboka teo, manangana saina ny Papoaziatika eran-tany rehefa 1 Desambra mba hahatsiarovana an'io fotoana io sy hanehoana ny fanantenan'izy ireo ahafahan'i Papoazia.
Manangana ny saina Kintan'ny Maraina ny Papoaziatika Andrefana manerana an'i Aostralia, mariky ny tolona ho amin'ny fahaleovantenany amin'i Indonezia, hanamarihana ny faha-60 taona nanofahofana azy voalohany tany amin'ny vanim-potoan'ny fanjanahantany Holandey teo aloha.
Nilaza tamin'ny fikambanam-baovao Suara Papua i Emanuel Goal, Mpandrindra ny Raharaham-pitsarana ho amin'ny Fiaraha-mitantana ny Fampiharana ny Lalàna sy ny Zon'Olombelona ao Papoazia, fa tsy nahazo alalana hanampy ireo mpianatra izy satria tsy voampanga tamin'ny fomba ofisialy izy ireo. Hoy izy:
Tsy niaraka mivantana tamin'ireo mpianatra Papoaziatika miisa valo izahay satria tsy nanavao ny satan’ireo mpianatra miisa valo ireo ny mpanao fanadihadiana, hoy izy. Hatramin'izao, nohadihadin’ny polisin'ny faritra Papoaziatika tamin'ny antsipiriany ireo mpianatra Papoaziatika miisa valo izay nanangana ny saina Kintan'ny Maraina tao amin'ny Lapan'ny Fanatanjahantena Jayapura. Mbola tsy misy sata ny fitazonana ireto olona miisa valo ireto.
Tsy vao sambany no lasibatra ny mpianatra manao fihetsiketsehana ho amin'ny fahaleovantenan’i Papoazia. Tamin'ny volana Aogositra 2020, noroahina ny mpianatry ny oniversite iray ary niatrika fiampangana ho namadika tanindrazana noho ny fanatevenan-daharana ny fihetsiketsehana ho fanohanana an'i Papoazia. Torak'izany ihany koa, mpikatroka miisa fito hafa, fantatra amin'ny anarana hoe “Balikpapan Seven” no voampanga ho namadika tanindrazana ary nogadraina efa ho herintaona noho ny fandraisana anjara tamin'ny fihetsiketsehana manohitra ny fanavakavaham-bolon-koditra tao Papoazia — tranga iray nisarika ny fifantohana iraisam-pirenena sy ny fanakianana ny governemanta Indoneziana.
Nihamafy ny fihenjanana tao Papoazia tato anatin'ny volana vitsivitsy noho ny fahasahiranana ara-toekarena vokatry ny COVID-19, ny fitakiana mitombo ho amin'ny fahaleovantena eo amin'ireo mpikatroka sy ny olom-pirenena Papoaziatika, ary ireo tranganà herisetra ataon’ny miaramila sy milisy vao haingana tao amin'ilay nosy.
Araka ny filazan'ny masoivohom-baovao, Suara, tamin'io andro io ihany rehefa nanao fihetsiketsehana ny mpianatra, dia nodoran'ireo mpikambana ao amin'ny Tafi-panafahana Nasionaly Papoazia Andrefana (TPNPB), vondrona milisy ao an-toerana, ny orinasa iray mpitrandraka hazo, PT Build Irian Wood, tao Sorong, Papoazia Andrefana.
Nilaza ny mpitondratenin'ny vondrona fa mandà ny fampandrosoana rehetra ao Papoazia izy ireo ary handray fepetra mitovy amin'izany amin'ireo orinasa izay manohy mampiroborobo ny zavatra mifanohitra amin'ny fanirian'ny fiarahamonina.
Japana 17 ora izay